Yintoni eyinyani malunga nokubulawa kukaDerk Wstersum kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-18 Septemba 2019	• 29 Comments
In eli nqaku Ndicacisile indlela ukugwintwa kukaWillem Holleeder Heineken kunye nokubulala awakwenzayo kunokwenzeka ii-PsyOps ezazifanele zilungiselele umthetho ngokomgaqo 'wengqina lesithsaba'. Ukuhlawulwa kwengqina kwesithsaba (kuziswe yiHolleeder PsyOp?) Kuthetha ukuba urhulumente angamtshutshisa nabani na ukuba afune oko, ngenxa yokuba le ngqina lisisithsaba lisenokungaziwa (ngenkqubo yengqina 'engaziwayo'). Olu hlaselo lwe- "Derk Wiresum" lunokuqinisekisa ukuba igqwetha elikhuselayo linokuthatha isenzo esingaziwayo okanye lingene kwinkqubo yokhuselo. Emva koko unokuba nengqina elingaziwayo lesithsaba, elikhuselweyo ligqwetha elingaziwayo elinobungqina obuqinisekileyo bokugwetywa. Ngamafutshane: urhulumente unokufumana wonke umntu ongemva kwebar ngaphandle kobungqina.
Esi mhlawumbi sisishwankathelo esifutshane kakhulu, kodwa ngamanye amaxesha isilwanyana kufuneka sivele sikhankanywe ngegama. Kwangoko namhlanje, kumzuzu wam we-Facebook, ndiye ndabuza ukuba ingaba uDirk Wiersum ukhona na okanye singajongana nophawu olunzulu. Ukongeza, abamelwane kunye nabantu obaqhelileyo kufuneka baphanjaniswe ngetekhnoloji efanayo (uncamathisele ubuso obudalwe nge-AI ngaphezulu kokurekhoda ngexesha langempela kwaye uqokelele imbali kunye neprofayile yemithombo yeendaba zentlalo ezenziwe nge-deepfake). Ngaba ucinga ukuba kuya kude kakhulu? Ndiyayiqonda loo nto, kodwa ezobuchwephesha zihamba kude kwaye yonke into esiyibona emfanekisweni kunye nesandi ivela kwimithombo yeendaba kwaye loo mithombo yeendaba isezandleni zabantu abanjengoJohn de Mol (bilililiire, umnini we-ANP kunye noTalpa). Ezo mithombo yeendaba inazo zonke iindlela zokuhambisa iindaba ezingeyonyani. Ngokuqinisekileyo akukho bungqina koko. Nangona kunjalo, nceda ufunde eli nqaku ngokufanayo kulungile ukufumana oko kunokwenzeka.
Ewe, iimpendulo zemithombo yeendaba zentlalo zinokuqhutywa yimvakalelo ngazo zonke iintlobo (zokwenyani okanye ezinzulu?) Iiprofayili eziphendula ngezimvo ezinje: "Ukuthetha into enje iyacaphukisa umntu oswelekileyo". Kuyothusa ngokwenene ukwala ukuba umntu ufile ukuba kukho ubungqina obuqinisekileyo. Kuya kuba krakra ngakumbi ukuba besikade siyisebenzisa amashumi eminyaka Ii-PsOOps zidlaliwe yiba. Endikwenzayo kukuphakamisa ukubakho, ngaphandle kokuthatha isikhundla sokuba kunjalo.
Ngayiphi na imeko, eli tyala liya kulungeleka ngokugqibeleleyo Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo ubukhulu, apho ingxaki yokuzenzela eyakho kunye nokuphendula kushukunyisiweyo, kukhokelela ekubizeni komthetho onzima. Ukuba lo mthetho ungqongqo ungachaphaza abantu abafowunela ikamva libaleka ngokukhawuleza kuyo yonke imvakalelo kunye nengxolo. Ukuba urhulumente ufuna ngenene ukufumana wonke umntu ongabinakho ukuvalelwa kwizitshixo, umntu ongenguye (“ubungqina besithsaba esingaziwayo”) unokunika ingxelo yobungqina (jonga ityala leHolleeder malunga nengqina lesithsaba). Igqwetha elikhuselayo akufuneki libekhona (kuba kunokuba yinto engaziwayo kwixa elizayo) kwaye wonke umntu unokuphela emva kwemivalo. Nawuphi na umntu ochasene nolawulo unokufumana ugqirha wezengqondo okanye uvalwe ngetyala lobuxoki.
Njengoko icing kwi dessert kunokubakho umthetho owenza ukuba kuhlaselo kube kunokwenzeka. Emva kwayo yonke loo nto, kufuneka ngokukhawuleza sicoce zonke izixhobo eziphantsi kwebhedi kuzo zonke ezo zindlu eAmsterdam! Oku kungenzeka kwaye akusekho njalo!
I-DNA kwengubo kaAnn Faber yayisikhokelela kuMichael Panhuis, kodwa kuninzi kakhulu!
Yintoni eyinyani yokuhlaselwa ngokufa ngenxa yokuhamba ngeenyawo kwa-Assen?
tags: advocaat, I-Derk Wiresma, I-Derk Wiresum, ukufa, eziziimbalasane, intetho yeendaba, ukuzama kokubulala, bulawa
18 Septemba 2019 kwi-21: 51
Ukuba awuzange ulandele iziganeko zangaphambili (zezoBubuvu) uya kuzikholelwa iindaba zanamhlanje 18 Sep 2019 kwakhona.
Ukugwinya kwe-Hap, ukulungele, ke kuya kufuneka ulandele iindaba ezizi (fake) kuba kungenjalo awuyi kuqonda amanyathelo okanye iziphumo zeendaba (ezingezizo).
18 Septemba 2019 kwi-21: 53
Abantu nabantwana baphinde bathi,
Ungasithatha kanjani isigqibo emva kweeyure ezimbalwa kwaye uthi kuyayamene nomsebenzi wakhe wobugcisa, ngelixa AKUKHO nto ibisaphandwa?
Igumbi lesibini lingathini kwangoko, nangona sele kwenziwe uphando.
Kutheni le nto singeva malunga neCPR
Akukho mntu uvuke kwii-ambulensi kwaye beliphi iqela labenzakeleyo. Hayi, ngaba babekho?
Bekungenzeka njani ukuba lo mmelwane angaze eve kuqhushumbe ngelixa inkwenkwe ihla ngendlela yaxelela iindaba zolutsha ukuba ivuswe ziimbumbulu.
Uyifumana njani entlokweni yakho konke ukuveza abantwana ngolu hlobo, ngaba bazisiwe abazali?
Kwaye ummelwane kwenzeka njani ukuba ungaze uve ezinye.
Ngaba ungatsho ukuba indawo iyanuka ...
Unyana omncinci uvukile bang, izitrato kude
Umakhelwane khange uve kwanto ??
18 Septemba 2019 kwi-22: 28
Ngetekhnoloji enzulu kakhulu ungafota indoda enomntwana emagxeni kwaye ubeke ubuso obungabonakaliyo (kodwa buyinyani) ubuso bayo (kubandakanya nelizwi elihlengahlengisiweyo)
18 Septemba 2019 kwi-22: 57
Ukudinwa kwemilenze kuzisa ingqondo kwimodi yokwamkelwa (i-NLP hypnosis)
19 Septemba 2019 kwi-00: 32
Bona apha ukuba le ndlela isebenza njani:
19 Septemba 2019 kwi-08: 19
Ewe, ividiyo yelo mmelwane isenokuba yeyobuxoki nayo.
Inkcazo encinci, kodwa ke phambili.
Indoda engasemva yesobunxele inesisu esikhulu ihamba ibuyela umva; emva koko isithunzi silungile kwakhona emva koko asiphindi, ngamanye amaxesha isithunzi asikho apho.
Ummelwane ngokwakhe; jonga kwintshukumo engeyiyo yemvelo yamashiya
kunye nento ebizwa ngokuba yimpompo emehlweni. Inkohliso!
Ukudubula okukhanyisela ngasemva kusetyenziswa isiphumo se-lens-flare, ha ha, isixa eshibhile kuba oko kuthetha ukuba ukukhanya akuhambelani nejakethi yomfana ekufuneka agcine intloko yommelwane emthunzini.
Umqobo ophakanyisiweyo ngasemva kufuneka ube lilitye eliqinileyo kuboniswa lilanga.
Isithunzi seveni eludongeni sinekona elingalunganga ukuba uthelekisa ithunzi lesiphatho sesibane.
Umzobo wobuso bubonke bumfazimbane, ububudenge kakhulu kumagama, i-AT5 ineekhamera eziphezulu, kodwa okwangoku, ha ha, ujongeka uburhabaxa kakhulu.
Ewe awuyiboni loo nto kwi-smartphone, kodwa uyayibona kwilaptop yokuqala elungileyo ukusondeza kancinci.
18 Septemba 2019 kwi-21: 55
Mamela udliwanondlebe. U-Hiddema ubuzwa into, imidiya sele inempendulo.
Udliwanondlebe uthi: "Kungenzeka ukuba igqwetha elixhasa ingqina lesithsaba liya kwisiqithi esingavuthwanga ubomi bakhe bonke."
Ke kuvunyelwe ukuhlala kungaziwa, amajelo eendaba sele egqibe kwelokuba umlingisi uHiddema, ngokokutsho kwakhe, waxhuma ngaphandle komdaniso (njengoko watshoyo kamva kudliwanondlebe) ukuba anqande ngentloko kuThe Hague, njengenkukhu enegunya.
umzuzu 3; 37
18 Septemba 2019 kwi-22: 27
Ewe ewe kwaye enye into ezayo:
"Simenyelwe ukuba singazisebenzisi ngokwethu."
Kungekudala 'ukuzenza ngokwakho' kunokukhokelela kwisohlwayo.
Patricia van Oosten wabhala wathi:
19 Septemba 2019 kwi-08: 41
Idd le ngqina kunye nalo mntwana ngoku iyandenza ndithandabuze. Iphosa yonke imvakalelo yokwenyani. Le ndoda inesidima esisuka 'kubugcisa bokungaziphathi kakuhle' ividiyo oyabelana ngayo luhlobo olutsha lwee-psychophytes abazifumana ziyonwabisa ngendlela engathethekiyo ukuba abantu abasayi kuphinda bakwazi ukuqhubeka netekhnoloji kwaye ke bayakuhlala bekopela. Rhoqo ukusuka kwiklabhu enye yabathandi-basekhohlo bengqondo ababekhe bakhathazwa luhlobo oluthile lwesiko ngomhla we-8e emva kokuzalwa.
IHidema (kunye neWikipma) nazo zibonakala zikhathazwa yile nto. Kudala ndicace mhlophe ukuba uHiddema kufuneka akhokele abantu (kunye nepalamente) kwisimo samapolisa, apho nje into ebizwa ngokuba yinyani ikhomba into, yonke into iza kubizwa ngokuba 'lulwaphulo-mthetho' kwaye yabhengezwe njengabaphula umthetho. Nokuba kunjalo eBaudet okanye van vanten, akakhathali. Ngesiqhelo, andiqondi ukuba angamane aphuhle imeko ye-moccro ngaphezulu kwento ethi, 'yonke' umpu phantsi kwebhedi yabo, zonke i-IQ ezisezantsi, ukulunga kwam, ndiyakholelwa ukuba ziyinjongo ukuba ekugqibeleni siqale loo mfazwe AmaSilamsi, kubonakala ukuba abanakulinda kunye ne-NWO yabo ngeziko lakwa-Israyeli.
Izantsi eziphantsi. Umdibaniso wonke.
19 Septemba 2019 kwi-13: 06
Ngaba iMocro Mafia ikhona ngokwenene okanye ngaba bambalwa abaqeqeshiweyo abaqeqeshiweyo be-AIVD abavunyelweyo ukudlala iMocro Mafia?
19 Septemba 2019 kwi-14: 03
Umzamo omncinci wenziwa ukufihla inyani yokuba uMadurodam ukwimeko yamapolisa ngokwenene, ukufihliswa akuselilo igama elilungileyo. UJunta uqala ukusondela, igqwetha elingaziwayo, ijaji engaziwayo ... ukugwetywa okwenziwe ngomso
19 Septemba 2019 kwi-16: 55
Imveliso enzulu enzulu yeJohn .. kodwa iphepha kwezo zibophelelo likhangeleka liyintombi enyulu. Oku akukaze kuhlawulwe. Imveliso yefilimu entle ..
19 Septemba 2019 kwi-17: 24
Ngendlela elula, siyalibala ukuba ezi ntlobo zemveliso zeHegelian ziyinkuthazo yokukhusela okanye ukubhatala abaphembeleli bakarhulumente, igqwetha / intatheli / ingqina lesithsaba nangcono. Imbuyekezo yemali ngokuhlawulwa komrhafi ikwangumqhubi obalulekileyo apha. Ubuxoki buyalawula
20 Septemba 2019 kwi-07: 25
Okokuqala saba ne-Holleeder mafia; ngoku sine-Mocro okanye i-nacromaffia ene-Ridouan Taghi. Zombini ngokucacileyo ziyi-AIVD PsyOp pawns ezivunyelweyo ukudlala indima yazo kwimafia eyinyani. Konke kuyimisebenzi yokuphumeza amanyathelo amatsha urhulumente. Uhlaselo lwesakhiwo seTelegraaf lwalungamampunge; Uhlaselo kwisakhiwo sePanorama lwalungamampunge. Yonke into iyinyani. Imveliso yeendaba ezingeyonyani kwimithombo yeendaba ngokudibeneyo nenkundla. Sukunegadi ngaphakathi! Ingxaki, ukuSabela, ukuSombulula umdlalo ovela kurhulumente ukukhupha inyathelo lamapolisa ngamanqanaba ngamanqanaba!
20 Septemba 2019 kwi-09: 41
Kwaye ewe, jonga
20 Septemba 2019 kwi-09: 26
Enkosi kakhulu kolu lubhalo licacileyo.
Omnye unokufumanisa le nto iyinyani.
Kodwa ngeenkcazo zakho kwaye uchaze imbali encinci ndiyifumana ibali lakho
kuvakala kamnandi ngakumbi kunakwimithombo yeendaba.
Ngaba zikho ezinye iziteshi kwi-intanethi ezabelana ngolwazi lwakho? Oku kufanele ukuba kuhambe ngokobuhlanga kuluvo lwam.
20 Septemba 2019 kwi-14: 14
Hayi, azikho ezinye iziteshi.
Zonke ezinye iindlela zosasazo zijongwa kude. I-Niburu.co, umzekelo, iqhutywa ngu-sweetheart wa-Freddy Heiniken. Akanakuze ke abhale ukuba ukuthathwa kwakhe yayiyinyani.
Enye imithombo yeendaba elawulwayo izama ukugcina ugxile kwi-911; bhala malunga ne-ufos njlnjl kwaye uhlala uthetha kuphela malunga neeplagi eziwayo (ezahlukileyo kwi-PsyOp hoax).
21 Septemba 2019 kwi-16: 56
Ngaba uGrapperhaus uthetha inyani?
Kule ndawo kuboniswe kaninzi ukuba ukuhlaselwa kwesakhiwo seTelegraaf kwisiseko se-Basis bekungeyongozi kwaye ukuba uhlaselo lwesakhiwo sePanorama nalo lungumcimbi ogqityiweyo. I-anti-tank grenade eshiya ukonakala kakhulu kunomonakalo obonisiweyo kwaye ukhona.
Ukuba bonke abo (babizwa njalo) abophuli-mthetho banxulunyaniswa nelo (kunye nokuhlaselwa okungeyonyani) ungatsho ukuba uGrapperhaus akazange awenze kakuhle umsebenzi wabo wasekhaya kwaye uParool akazange aqinisekise ngento evele kwi-imeyile yabo. Bathetha nje into kwaye benza okuthile kwaye sikwafuneka sibathathe nzulu abo bantu.
Kwaye kutheni eli nqaku lingasabiwa kwakhona, inkululeko yokuthetha ke itshayelwe ngokupheleleyo ngamadoda ahlekisayo njengoJohn der Heuvel, kufuneka abe neentloni ngaye, BAH!
21 Septemba 2019 kwi-17: 44
I-Grapperhaus ixakekile ngezinye izinto ..
21 Septemba 2019 kwi-17: 09
Imozulu egadulayo enesimo esinje nge-mega hoax kukuba banomdla ngakumbi kumenzi wobubi kunexhoba (alukho olunye ukhetho kuba kulungile ukuba kuyenzeka …………
Kwaye okwangoku akukho nalinye iqhosha elinikezwe ligunya elibizwa ngamapolisa, konke ukuqikelela
21 Septemba 2019 kwi-17: 47
mhlawumbi iVenJ kunye ne-OM zifumene iingcebiso ezivela kusapho lwe-zorregieta. Obona bungqina buninzi bokuba yonke le nto imiselwe kwaye abantu abanyamezeleki, boyika ukuba eli tyala liza kutyholwa ngenxa yoko kuyilo psyop yomthetho omtsha. Mangalisa indlela grapperhaus ngoko nangoko engaxutywanga ngayo 🙂
24 Septemba 2019 kwi-15: 01
i-pablo escobar ayivumelekanga ukubopha iilensi ze tagi ~ (ukuba sele ikhona), umdlali omnye emva komnye. Umbukiso onjani, unokubiza imali encinci!
24 Septemba 2019 kwi-20: 33
Ezo zigwebo zinkulu, njengokuhlaselwa kwenkqubo yezobulungisa, ukujongela phantsi ulawulo lomthetho njalo njalo
Ngelixa kungekho namnye umenzi wobubi oye wagwetywa, engafunyanwanga, kungekho mntu ukrokrela, akukho nto angayenziyo kodwa iingxelo zetyala.
Isizathu esigwetywe yiMedia, ukukhutshwa kweefoto ezintathu zexhoba, kunye ne-1 kuphela yevidiyo yexhoba.
Luphi usapho lwegqwetha, ibali lonke libeka imithombo yeendaba emngciphekweni ngenxa yesizathu
ukuphakamisa amandla angamashumi amathathu anesithathu ngaphandle kwempazamo kumtshutshisi.
Baphi na abameli be-NL bekhangela lo mbuzo ucinezelayo, uphi umthetho!
28 Septemba 2019 kwi-17: 31
Kungekudala emva kohlaselo, kwabhalwa inqaku elikwi-intanethi apho ummelwane wathi i-alamu yakhe ihambile ye-07: 33, emva koko yeva kudubula ...
Abantu abasebenzisa ipilisi enye kufuneka nabo baphathwe ngokwe-Grapperhaus. Umgaqo wokunyamezelwa kwamaDatshi… ..
Sele kuqeshiwe igqwetha elitsha, oza kuhlala engaziwa. Abagwebi kunye nabatshutshisi banokuhlala bengaziwa kwixa elizayo. Ukuba umntu kufuneka athulisiwe, konke ekufuneka bekwenzile kukwakha isoyikiso sokuzama loo mntu kwinkundla yamatyala engaziwayo kwaye abaphose ejele ...
8 Oktobha 2019 kwi-19: 18
Le ntetho ibhengeza ngokwaneleyo umrhumo, Quoute: "Oko i-9 / 11 kwi-2001 yayikuthetha malunga nomyalelo wehlabathi, uphawu olunjalo lokubulala igqwetha ngenxa yokuzibandakanya ngobuchule bomthetho wenkundla yaseDutch",
8 Novemba 2019 kwi-00: 14
Kwaye kwakhona jonga apha kwiphepha leendaba laseNetherlands ukuba le ncwadi isenokungapapashwa.
Okanye ngaba incwadi ingaba mhlawumbi iphakamise isigqubuthelo kwiintsomi ezigqibeleleyo zentsomi, oko kuthetha inqaku elipheleleyo.
Ngaba akufuneki silinde iminyaka embalwa de abantu abacinga ukuba bayaphangwa banesidima, kwaye kuphela koko baya kupapasha i-HOAX HEINEKEn,
U-HeINEKEN AKUKHO MFUMANELE UKUXELWA UKUZE KUZUZE KAKHO KAKHULU-NGOKUKHANGELELWEYO 😉
6 Disemba 2019 kwi-20: 51
16 Disemba 2019 kwi-23: 15
Inkundla yenkundla ayivunyelwa
Kwaye i-telegraaf iphinda ixele ukuba le nkqubo iya kuba nkulu kune-Holleeder's.
Umbhali omtsha osuka kwitanki likaMol ucinga ukuba uvukile kwaye unendima yokukhokela
yabelwe uMens Taghi noJohn van die Heuvel kunye neeVugts kunye nabadibanisayo noGrapperhaus naturlich
mhlawumbi nokubhalwa kwemiboniso bhanyabhanya sele kulungile, kunokuba nje, ibali elinomdla
17 Disemba 2019 kwi-00: 47
Ukuhluza? Asingobungqina nje bemovie? Kodwa ke ibizwa ngokuba "ziindaba"
I-protagonists ezinomdla ezinomdla ... ngokuqinisekileyo uJohn de Mol akakwazi ukwenza iimveliso ezinzulu. "Obu buchule abukho phantse kude kube ngoku" isikhohlela esikhohlela isikhohlela ...
U-John unodade omnandi kakhulu, owonwabileyo, ke nguJohn omthembileyo. Ngokwenene! I-Ragouan Tagi ikhona ngokwenene!
Kwaye emva koko ndlovu yeza neswout enkulu kakhulu ..
« Ngaba kuya kubakho umlo phakathi kwe-US ne-Iran kungekudala?
I-Greta Thunberg I-UN intetho isikhumbuza "iintsana ezilahliweyo ngaphandle kwentetho" ye-Iraq »
Utyelelo lulonke: 4.141.098